Thola ukuthi yini ukuvakasha kwezemidlalo nokuthi ukwenze kuphi | Izindaba Zokuhamba
El ezokuvakasha kwezemidlalo sekuyenye indlela yokuhamba lokho kuya ngokuya kwanda. Izinhlobo zezokuvakasha bezilokhu zishintsha ngokushesha ngenxa yomhlaba, ukuxhumana okuthuthukile nezindleko zokuhamba eziphansi, okusho ukuthi namhlanje sinezizathu ezahlukahlukene zokuvakashela izindawo ezahlukahlukene, sihlukanisa umhlaba wezokuvakasha kakhulu. Kukude ukuthi uhambo lwamaqembu luhlelelwe ukuba sezindaweni ezisogwini noma ukubona izindawo ezihleliwe emadolobheni.
Namuhla umhlaba wezokuvakasha uhlukahlukene ngokweqiniso futhi ukhululekile, kusuka lapho ukuthi ukuvakasha kwezemidlalo kuvele, umkhuba othakazelisa kakhulu futhi ongaba isisusa esikhulu sokuhamba. Sizobona ukuthi lokhu kuvakasha kwezemidlalo kuqukethe ini nokuthi singaluqhuba kanjani lolu hlobo lwezokuvakasha noma lapho lungatholakala khona.
1 Kuyini ukuvakasha kwezemidlalo?
2 Izinhlobo zokuvakasha kwezemidlalo
3 Qalisa umjaho webanga elide
5 Izindawo zokushushuluza
6 Ezokuvakasha kwezemidlalo zokuntweza olwandle
7 Imicimbi kanye nezokuvakasha kwezemidlalo
Kuyini ukuvakasha kwezemidlalo?
Ezokuvakasha kwezemidlalo iyi- uhlobo lwezokuvakasha olugxile kwezemidlalo. Uhambela ukubona ubuqhawe noma umdlalo. Kujwayelekile futhi ukuhamba uyokwenza umdlalo othile, njengokuthatha umzila othile wokuhamba izintaba noma ukwenza ikhayithi noma ukuntweza olwandle olukulungele kakhulu. Ezokuvakasha kwezemidlalo ziyadlondlobala namuhla ngoba kushibhile ukuthatha uhambo oluncane kunaseminyakeni edlule. Kungakho kunabantu abaningi abahamba izinsuku ezimbalwa bezobuka umdlalo noma badlale umdlalo wokuzijabulisa okulula. Ngenye indlela yokubheka ukuvakasha, egxile kwezemidlalo esiyithandayo nakokuzilibazisa. Manje uhambo ludlulela ngaphezu kokuphumula, ukubaleka noma ukuvakashelwa kwamasiko.
Izinhlobo zokuvakasha kwezemidlalo
Ukuvakasha kwezemidlalo kungaba ngezinhlobo eziningi. Singakwazi iya endaweni yezintaba ukuze ushushuluze, ukuthatha umzila wokuhamba izintaba noma futhi uye emarathon edolobheni, ngoba baningi abadumile futhi. Ngakolunye uhlangothi, kukhona labo abenza ezokuvakasha kwezemidlalo ngokuhambela imicimbi ethile, ikakhulukazi emidlalweni kanobhutshuzwayo, njengoba kwenzeka eSpain noma kulo lonke elaseYurophu ngemicimbi efana ne-Soccer World Cup noma i-European Cup.
Qalisa umjaho webanga elide
Kunezindawo eziningi esingagijimela kuzo, kusuka kumakhilomitha ayishumi kuya kuhhafu yama-marathoni noma ama-marathoni agcwele. Kepha amanye ala ma-marathoni, lawo amakhulu abantu awalungiselelayo, adume ngempela. EyaseNew York ingenye yazo, kodwa kukhona neyodwa eBoston, eParis noma eBerlin. Le micimbi emikhulu ijwayele ukwenzeka ezindaweni ezinjengamadolobha amakhulu futhi imicimbi impela okuyisipiliyoni ukuyijoyina. Kepha kufanele uzilungiselele ukugijima amakhilomitha angama-42 emjahweni.
Kukhona izindawo lapho labo abafuna ukwenza ezemidlalo njengokufuna njengokukhuphuka, okudinga izinga elithile lobuchwepheshe, lapho beya khona. ESpain sinezindawo ezifana isibonelo iNaranjo de Bulnes, enodonga olukhulu oluqondile. Ezinye izindawo ezinhle yiMount Asgard eCanada, endaweni eyiqhwa neqhwa, iYosemite e-United States, enodonga olukhulu lwamatshe okufanele lukhuphuke. EPatagonia e-Argentina sithola nezintaba ezimangazayo eziyiphupho lanoma yimuphi umqansa.
ESpain sinezindawo ezinhle zokushibilika e-ski, ngakho-ke kunezokuvakasha eziningi zasebusika. Isibonelo, sineziteshi ezifana I-Baqueira Beret eLleida, edume kakhulu futhi ekhethekile, esesiGodini esihle sase-Aran. Inamakhilomitha angama-160 wamathrekhi amakiwe. Enye i-ski resort iseHuesca, Formigal, enomoya omuhle wentsha. Enye edume kakhulu yiSierra Nevada eGranada, ethandwa kakhulu yimindeni. Ngaphandle kweSpain kunezinye izindawo ezinjengeChamonix eFrance, iZermatt eSwitzerland noma ePortillo, eChile.
Ezokuvakasha kwezemidlalo zokuntweza olwandle
Umkhuba wezemidlalo yamanzi usabalele futhi kunezindawo lapho kungenziwa khona cishe unyaka wonke. ESpain sinezindawo ezifana Ibhishi laseMundaka eVizcaya, olwandle lwePantín eFerrol noma eRazo e-A Coruña, bonke bangasenyakatho. Kukhona nezinye ezitholakala ezindaweni ezifana neziqhingi, njenge-El Quemao eLanzarote. Endaweni eseningizimu sithola izindawo ezinjengeCádiz ezinamabhishi amaningi lapho ungenza khona lolu hlobo lwezemidlalo ngenxa yezimo zazo ezinhle.
Imicimbi kanye nezokuvakasha kwezemidlalo
Kunemicimbi ehlale idume kakhulu. Umdlalo wamanqamu wemidlalo emikhulu yebhola njengeNdebe Yomhlaba noma amaNdebe yimicimbi edlalwa ezindaweni ezahlukene. Kukhona futhi abanye bathanda iWimbledon noma isibonelo iTour de France, uma sithanda ukuhamba ngebhayisikili, okungalandelwa izindawo eziningi eFrance, noma uhambo lokuhamba ngebhayisikili eSpain.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Ezokuvakasha kwezemidlalo